Sequoia, ọbá akwụkwọ na-etinye ụkpụrụ OpenPGP n'ọrụ | Site na Linux
Sequoia bụ ọbá akwụkwọ ọrụ na usoro ihe eji arụ ọrụ que mejuputa ụkpụrụ OpenPGP (RFC-4880), ndị isi atọ nke ọrụ GnuPG mepụtara ọbá akwụkwọ a, ndị kpebiri ịmepụta mmeghe ọhụrụ nke OpenPGP - na asụsụ nchara iji melite nchekwa na ntụkwasị obi nke codebase, nke ahụ na-enye ngwaọrụ iji rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu na ebe nchekwa.
Na mgbakwunye na imezi nchekwa, Sequoia ọ na-anwa ikpochapụ glitches na GnuPG, nke na-enweghị ike idozi ya na isi oru ngo na-enweghị imebi ndakọrịta ma ọ bụ budata ịmegharị koodu ntọala.
Dịka ọmụmaatụ, GnuPG jikọtara ya n'etiti ihe dị iche iche, na-eme ka o sie ike ịme mgbanwe, ọ na-agbagha ntọala koodu ahụ ma na-eme ka o sie ike ịmepụta usoro nyocha nke otu. Ejikọtaghị gpupg akara ahịrị ngwa ọrụ yana ọbá akwụkwọ ọrụ yana enwere ike ịme ụfọdụ omume site na ịba uru.
Sequoia Ewebata sq akara njikota iwu na nkwado Git style subcommand na nhọrọ API abụọ: ọkwa dị ala na ọkwa dị elu. Enwere njikọ maka asụsụ C na Python.
Imirikiti ọrụ kọwara na ọkọlọtọ OpenPGP nkwado izo ya ezo, decryption, okike na nkwenye nke mbinye aka dijitalụ.
N'etiti atụmatụ ndị dị elu, a hụrụ ya na ọ na-anabata ihe nkwenye site na ntinye aka di iche iche nke enyere di iche, mmegharị maka mwekota na ndị njikwa ngwugwu (APT, RPM, ibu, wdg), ikike ịbelata mbinye aka site na ọnụ ụzọ na oge.
Usoro API dị ala na-amụtagharị ikwesị ntụkwasị obi dị ka o kwere mee ike nke OpenPGP na mgbakwunye ndị metụtara ya, dị ka nkwado ECC na ihe ederede nke mbipụta n'ọdịnihu nke ọkọlọtọ. Naanị ihe ndị ọzọ bụ akụkụ nke nketa nke nkọwapụta nke nwere ike imetụta nchedo n'ụzọ na-adịghị mma, dị ka MD5 hashing support.
API dị ala na-akwado nhazi ozi ezighi ezi. API dị larịị adịlarị nso na mkpuchi zuru oke nke ọkọlọtọ OpenPGP na njikere ịmegharị data OpenPGP na ọkwa dị ala (ụdị nkwụsi ike nke 1.0 a na-atụ anya n'oge na-adịghị anya).
Mgbe n'aka nke ọzọ, API dị elu ka na-amalite ịmalite ya mere rute ya naanị ekpuchi ike dị ka ọha igodo nchekwa na ohere n'elu netwọk. A ga-agbakwunye ngalaba ndị ọzọ akọwapụtara na nkwado dịka ọrụ ahụ na-amalite.
Ihe ngwugwu na-enyekwa ihe ngwugwu nyocha dị ike enwere ike iji ya n'oge mmepe mmepe, nbipu, yana nyocha. A na-ejikọ ngwaọrụ nyocha na nyocha iji nyocha anya nke ọma usoro nke ozi ezoro ezo, ntinye aka dijitalụ, na igodo.
Ugbu a Nyiwe akwadoro Sequoia bu Linux, FreeBSD, Windows, macOS, Android na iOS, Tụkwasị na nke a, ọ ga-ekwe omume iji ọrụ cryptographic nke a na-enye site na ikpo okwu, dị ka ndị na-ahụ maka nhazi maka ngụkọta na enclaves dịpụrụ adịpụ.
Iji nyekwuo iche, a na-eme ya ikewapụ ọrụ ndị na-arụ ọrụ na igodo ọha na nke onwe n'ime usoro dị iche. Dịka ọmụmaatụ, a na-emepụta otu isi ihe n'ụdị usoro dị iche. A na-eji usoro nkwekọrịta Cap'n maka usoro mmekọrịta.
N'ikpeazụ, ọ na-anọgide ịkọwa nke ahụ nso nso a weputara ohuru nke Sequoia, ụdị kachasị dị ugbu a bụ Sequoia 0.20.0 n'ime se tinye ngwugwu sequoia-openpgp ala-ala, mmemme sqv (gpgv nnọchi) iji nyochaa aha dị iche iche na sqop ịba uru na ntinye nke interface na-enweghị steeti (Stateless OpenPGP CLI).
Emeela ka ihe ndị a chọrọ maka asụsụ Rust bụrụ nke 1.46 na ojiji nke sistemụ mwekota na-aga n'ihu iji lelee mgbanwe agbanweela yana oghere nnwale OpenPGP ka mma.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere ya banyere a n'ọbá akwụkwọ, ị nwere ike ịlele nkọwa na ya ukara website Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Sequoia, ọbá akwụkwọ na-etinye ụkpụrụ OpenPGP n'ọrụ